Baro luqad | DM words
Bahasa हिन्दी فارسی 才能 বাংলা Shqip Italiano Kurdî Polski Português Pусский Српски ไทย Türkçe Tiếng Việt Ελληνικά Română українська 日本語
Maxaad ubaahantahay inaad barato luuqad cusub?
Yoolalka lagu gaarayo
Maxaa loogu baahan yahay DM? Erayada DM (Qaamuuska 1000 erey) waxaa loo sameeyay in lagu xaliyo arimo badan oo ku saabsan soogalootiga dowladaha, shirkadaha wax ka qabta shaqaalaha ajaanibta ah iyo baahiyaha aasaasiga ah ee nolol maalmeedka dhamaan kooxaha soogalootiga ah. Arimaha soo galootigaDadku waxay la kulmaan caqabado nolol maalmeedka iyo u guurista dibadda waxay caqabad dhab ah ku noqon kartaa qaar iyaga ka mid ah maadaama ay saameyn ku yeelan... more
Waxaan aaminsanahay in barashada 1000 erey iyo isku dayga in loo adeegsado jumladaha fudud ay noqon karto mid wax tar badan leh si looga gudbo cabsida ku hadalka af qalaad nolol maalmeedka. Erayada DM ayaa soo saaray erey aad u qaas ah oo si gaar ah loogu talagalay soogalootiga adduunka. Qaamuusku wuxuu kakooban yahay 1000 erey iyo 300 oo jumladood oo lagu daray 33 cutub loona qaybiyey 7 qaybood. Waqtigan xaadirka ah, qaamuuskeena waxaa lagu turjumay 3... more
Dadku waxay si isdaba joog ah ula kulmaan caqabado dhinac kasta oo nolosha ah, barashada luqad cusub waa mid nooc ah. Waxay kuxirantahay duruufaha, qeexida qaababka saxda ah ee lagu barto luqad cusub ayaa aad uga dhib badan taa maxaa yeelay dhamaan shuruudaha iyo tilmaamtu kuma haboona qof walba. Tani waa sababta ugu weyn ee igu riixday inaan helo xal ku habboon dhammaan soogalootiga daneynaya inay wax bartaan oo ay la kulmaan caqabado cusub. ... more
Kor u qaad ganacsigaaga